Iindaba - Ixesha leMiboniso kwi-Intanethi Liza-Isambatho sokuFumana iParis / Ukwehlisa uMlingo kwi-Intanethi
Ixesha leMiboniso kwi-Intanethi liza-iZambatho zokuThengisa eParis / ukuSebenzisa ubuGcisa kwi-Intanethi
Intsholongwane ye-corona itshintsha uninzi lwemiboniso kwinkonzo ye-Intanethi. Into esiyithathayo ngoku ngoSeptemba 2020 zezi zilandelayo: I-Apparel Sourcing Paris (ngo-Septemba 1,2020-Februwari 28, 2020) kunye ne-SOURCING kwi-MAGIC Online (ngo-Septemba 15-Disemba 15, 2020)
Isambatho Sourcing eParis kunye neeShawls kunye neeScave yimiboniso yorhwebo yamazwe aphesheya yefashoni ehlelwe nguMesse Frankfurt France (MFF). Umboniso uzakudityaniswa kunye neAvantex, Leatherworld, Texworld kunye neTeworld Denim Paris, ezenzeka kabini ngonyaka kumabala emidlalo aseLe Bourget kwaye zitsale amawaka abatyeleli abaziingcali abavela kwihlabathi liphela.
UKUGCINWA kwi-MAGIC Online kunika iingcali ukufikelela kuluntu olusebenzayo lwamazwe aphesheya abavelisi, abathengisi kunye nabanikezeli beenkonzo, ngokwamanani. Abazimaseyo baya kuba nakho ukukhangela kwimakethi yedijithali ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca kwiqonga ekulula ukulisebenzisa elenzelwe ukufunwa kwefashoni kunye nobuchwephesha bokunikezela ngengqondo.
Eli lixesha lethu lesibini lomboniso we-Intanethi. Sakha igumbi lethu lokubonisa kwi-intanethi ngokusebenza kunye neqela lethu kwi-intanethi. Uninzi lwemiboniso engaxhunyiwe kwi-intanethi irhoxisiwe kulo nyaka. Umboniso okwi-Intanethi njengendlela entsha yeshishini yamkelekile ngakumbi kunangaphambili. Kubonakala ngathi iya kuba yindlela eqhelekileyo yeshishini lamanye amazwe kwixa elizayo. Le miboniso mibini ye-Intanethi iya kuhlala iinyanga ezi-3-4. Sikulungele kwaye Wamkelekile yophando!